विश्वकै अग्लो बन्जिजम्पको सफल परिक्षण - Jagaran Post
Home/अर्थ बजार/विश्वकै अग्लो बन्जिजम्पको सफल परिक्षण
अर्थ बजारगण्डकी प्रदेश
द क्लिफ नेपाल प्रालिले सञ्चालन गरेको बञ्जीमा यसअघि ड्रम पठाएर परीक्षण गरिँदै आएकोमा बिहीबार मानिसले नै पहिलो पटक परीक्षण गरेका छन । बञ्जीका सञ्चालक राजु कार्कीले बञ्जी गरेर गरेका हुन् । बञ्जीजम्प बढी उचाइका कारण बढी रोमाञ्च भएको कार्कीले बताए । भोटेकोसी बञ्जीजम्पमा लामो समय काम गर्नुभएका कार्कीले उचाइ बढी र फराकिलो क्षेत्र भएका कारण कालीगण्डकीमा बञ्जी गर्नुको बेग्दै आनन्द प्राप्त भएको अनुभव सुनाए । कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा बञ्जीजम्प खेलाउने काम भने नयाँ वर्षबाट गर्ने भएको छ । “केही कामहरू बाँकी रहेका कारण व्यावसायिक रूपमा जम्प गराउने काम नयाँ बर्षबाट मात्रै गर्छौं,” सञ्चालक कार्कीले भने ।
प्राकृतिक पुलमा निर्माण भएको विश्वकै अग्लो बञ्जीजम्प भएको दाबी सञ्चालकको छ । मकाउमा दुइटा घरका बीचमा गरिने बञ्जीलाई विश्वकै अग्लो मानिएको छ । कालीगण्डकी माथि ५ सय २० मिटर लामो र २ सय २८ मिटर उचाइको सिंगल स्पान झोलुंगे पुल विश्वकै अग्लो र साहसिक पैदलयात्री पुल हो ।
यो पुलमा बनेको सबैभन्दा अग्लो बञ्जीजम्प, विश्वकै अग्लो लठ्ठामा खेलिने पिङ(स्वीङ), विश्वकै अग्लो र नेपालकै एक मात्र तारमा खेलिने (स्काई साइक्लिङ) सञ्चालन गरिँदै छ । कालीगण्डकी पारी बलेवामा सुबिधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ बञ्जीजम्पमा आउने पर्यटकहरूलाई ध्यानमा राखेर बागलुङको बलेवामा २५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा ग्ल्याम्पिङ रिसोर्ट सञ्चालनका लागि संरचना निर्माण काम भइरहेको छ । रिसोर्टमा सबैजसो कोठाहरू टेन्टबाट बनाइँदै छ । टेन्टबाट सबै बाहिरी दृश्य देखिने गरी निर्माण भइरहेको छ । १० वटा डिलक्स र १० वटा स्टान्र्डड टेन्ट बनाइएको छ । जसमा ६० जनासम्म पर्यटक बस्न सक्छन, खुल्ला चौरमा बस्नका लागि टेन्टहरू राख्ने र त्यसरी ३ सय जनासम्म राख्न सकिने कार्कीको भनाइ छ । करिब २० करोडमा रिर्सोट सहितका संरचना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सञ्चालक कार्कीले बताए । साहसिक पर्यटनमा रुचि राख्ने पर्यटकलाई लक्षित गरी बनाइएको बन्जिजम्प पर्वतको चिनारी हुने विश्वास लिइएको छ ।
हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सानिमा ग्रूपको प्रवेश, धुम्वाराहिमा खुल्यो १०८ कोठासहितको होटल
२०७६ श्रावण २७, सोमबार २०:३८ गते
रोपाइँको नाटक ! रोपाइँको नाटक !
२०७६ असार १६, सोमबार ०६:५७ गते